Steinkjer (town) - Wikipedia
Another view of the town from Bogen
View of Steinkjer in 1880
Steinkjer after the bombings of World War II
Steinkjer municipal building
Steinkjer waa xarunta maamulka ee degmada Steinkjer ee gobolka Trøndelag, Norway. Magaaladu waxay ku taallaa dhinaca waqooyi-bari ee qaybta hoose ee Trondheimsfjorden, oo ku taala webiga Steinkjerelva. Qaybta barafka ee magaalada, webiga Figgja ayaa sidoo kale u duulaya fjord. Magaaladu waa laba qaybood oo kala ah Steinkjerelva, oo abuuraysa labada xaafadeed ee Nordsia iyo Sørsia. Labada waddo ee Yurub ah ee E6 iyo Tareenka Nordlandsbanen ayaa dhex maraya magaalada, oo ugu dambeyntii u adeegta magaalada Steinkjer Station  Kaniisadda Steinkjer iyo Kaniisada Egge ayaa labadaba ku yaal magaalada.
Ka hor 1-dii Jannaayo 2018, magaalada ayaa ahayd xarunta maamulka ee gobolka Nord-Trøndelag, tan iyo maalintaasi waxay ahayd kursiga cusub ee degmada Trøndelag. Taas macneheedu waa degmada Degmada Trøndelag waxay ku saleysan tahay halkan, waa gudoomiyaha gobolka, wakiilka boqorka iyo dowlada Norway ee degmada Trøndelag.
Magaalada 7.87-kiiloomitir (1,940-acre) waxay leedahay dad (2017) oo ah 12,744 taas oo magaalada siinaysa tiro dad ah oo tiradoodu tahay 1,619 qof oo halkii kilomitir oo isku wareeg ah (4,190 / sq mi).
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Steinkjer_(town)&oldid=183234"
Last edited on 19 Oktoobar 2018, at 14:50